Ukunciphisa abavelisi kunye nabaxhasi | China Ukutsalwa kweComb Factory
Kwisixhobo esi-1 esijikelezayo sokuchithwa kwezilwanyana
Kwi-1 Isixhobo sokuSheda esijikelezayo sePetet sidibanisa yonke imisebenzi yokudiliza ideshedding kunye nokudibanisa rhoqo ngokugqibeleleyo.Zonke iikhombi zethu zenziwe ngentsimbi engenasici .so zizinzile kakhulu.
Cofa iqhosha lesiko kwaye ujikeleze isi-3 kwisi-1 esijikelezayo isixhobo sokuphalaza ukutshintsha imisebenzi oyifunayo.
Ikama yokuchitha isusa ingubo yangaphantsi efileyo kunye neenwele ezongezelelekileyo ngokufanelekileyo Iya kuba ngumncedi wakho ophucukileyo ngexesha lokuphalaza.
Ikama lokudiliza linamaqhuqhuva ali-17, ke linokususa amaqhina, iitangha kunye neemethi ngokulula. iileyidi zikhuselekile, kwaye aziyi kwenzakalisa isilwanyana sakho kwaye zigcine ibhatyi yakho yezinwele ende ikhazimla.
Ikama lokugqibela liyikama yesiqhelo.Le ikama inamazinyo asondeleleneyo ngokusondeleyo kwaye isusa idander kunye neentakumba ngokulula kakhulu.Ilungile nakwindawo ezibuthathaka njengeendlebe, intamo, umsila kunye nesisu.